I Prisila sy Akoila
“Veloma amin’i Prisila sy Akoila, mpiara-miasa amiko ao amin’i Kristy Jesôsy; izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjy ny aiko, nefa tsy izaho ihany no misaotra azy, fa ny fiangonana rehetra any amin’ny jentilisa koa” Rom. 16:3,4
Nametraka ohatra i Paoly ho fanoherana ny fiheverana izay nihanahazo vahana tao aminn’y fiangonana, fa ireo izay efa nohafahana tanteraka tamin’ny filàna hanao asa mafy ihany no afaka hahatontosa tsara ny fitoriana ny filazantsara. Nohazavainy tamin’ny fomba tsotra ny zavatra azon’ireo laika manokan-tena hatao, any amin’ireo toerana maro izay misy olona tsy mahalala ny fahamarinan’ny filazantsara. Ny fampianarana nataony dia nampisy faniriana tao am-pon’ireo mpiasa be fanetren-tena, hanao izay azony atao hampandroso ny asan’Andriamanitra, raha manao ny asa fivelomana izay fanaony isan’andro ihany izy ireo.
I Prisila sy i Akoila dia tsy nantsoina hanolotra ny fotoanany manontolo ho an’ny fitoriana ny filazantsara, nampiasain’Andriamanitra anefa ireto mpiasa be fanetren-tena ireto hanoro an’i Apôlôsy ny lalan’ny fahamarinana. Nampiasa fitaovana isan-karazany Andriamanitra ho fanatanterahana ny fikasany, ary rehefa voaantso hanolotra ny hery rehetra ananany ireo izay manana talenta manokana amin’ny fampianarana sy ny fanatrarana amin’ny alalan’ny filazantsara, ny hafa kosa, dia any amin’izay tsy mbola nitarihana ny tanan’olombelona ho amin’ny fanamasinana, no nantsoina mba hanao ny amphanay manan-danja amin’ny famonjem-panahy.
Misy sahan’asa midadasika misokatra manoloana ireo mpiasa mpitory filazantsara mianto-tena. Maro no mety hahita fanandramana sarobidy amin’ny asa fanompoana eo am-panaovana ny asa aman-draharahany amin’ny fotoana fanaovana izany, amin’izany fomba fiasa izany, ireo mpiasa mafy ireo dia handroso ho amin’ny asa fanompoana goavana any amin’ny sahan’asa mila azy.
“Ny mpanompon’Andriamanitra manolotra ny fiainany manontolo kosa hitory ny filazantsara dia milanja ny mavesatra ao am-pony. Tsy mandala fotoana hanaovana izany izy. Tsy misy fiantraikany aminy eo amin’ny asa fitoriana ataony ny fivelomana raisiny, ary tsy mampihemotra azy eo amin’ny adidiny ny fahasarotana mitranga. Avy any an-danitra no nandraisany baiko, ary any koa no ifantohan’ny fijeriny mba handraisany ny valisoa, rehefa tontosa soa aman-tsara ny asa nankinina taminy”